Global Voices teny Malagasy » Soroka miara-milanja venezoelana hanome sakafo ho an’ny beantitr’i Caracas · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 01 Jolay 2020 5:46 GMT 1	 · Mpanoratra Sabrina Velandia Nandika (en) i Laura, Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Venezoela, Mediam-bahoaka, Sakafo, Tanora, Vaovao Tsara, COVID-19
Mpikamban'ny Programa Mpiray monina tsara fanahy. Sary nahazoana alalana sy hita ao amin'ny Instagram .
Mandihy am-pifaliana sady mankasitraka i Julieta, vehivavy mihoatra ny 90 taona avy ao an-drenivohitr'i Venezuela, ao Caracas, isaka ny mitondra sakafo amin'ny harona i Vicente. Tamin'ity herinandro ity izy nanam-pifaliana tamin'ny nandraisana frômazy, vary, akoho efa voaomana sy henakisoa, lasopy sy mofo, ankoatra ireo karazan-tsakafo hafa. Misy ‘abuelitos’ — voambolana espaniola manondro ny ray aman-dreny sy anarana iraisana anondroana ireo zokiolona ao Venezuela — miisa 400 hafa mandray ampaha-tsakafo toa azy ihany koa isa-kerinandro noho ny Programan'ny Mpiray monina tsara fanahy (Plan Buen Vecino) .
Abuelita (zokiolona vehivavy na nenibe) nisoratra anarana tao amin'ny Programa Mpiray Monina Tsara Fanahy. Nahazoana alalana sady hita ao amin'ny Instagram .
Nampidirin'ny governemanta ny fepetram-pihatakatahana ara-piarahamonina  tamin'ny 16 marsa hifehezana ny fielezan'ny coronavirus. Na izany aza dia nipongatra ireo fahasarotana hafa. Ahoana ny fomba ividian'ireo olona marefo indrindra sakafo, raha matahotra ny hivoaka ny trano ry zareo ary tsy misy ny olona azony irahana hanao izany, na raha tsy manana ny ilaina hampanao izany ry zareo?
Roa andro taorian'ny nampidirana ny fepetra tao Caracas, nisy vondron'olona nanangana ny Programa Mpiray Monina Tsara Fanahy, tambajotram-bolantera (volunteers), mikendry ny hizara sakafo ho an'ny zokiolona toa nilaozana. Ao Venezuela, misy fikambanana sy fampitam-baovao mahazatra mampiasa ny voambolana ‘fandaozana’ na ‘orfandad,’ hamariparitana ireo zokiolona, izay voatery nifindramonina ny fianakaviana noho ny krizy sôsiô-pôlitika sy mahaolona, sady tsy mahazo fanohanana avy amin'ny Fanjakana. Araka ny FTMF Venezoelana Convite, efa ho iray tapitrisa ny zokiolona  manirery rehefa nifindramonina ny fianakaviany.
Ao anatin'izy ireo ry Vicente Velutini, izay tompon'andraikitra tamin'ny fanangonana sy ny fizarana ireo fanomezana. Novolavolainy ihany koa ny lalana ho aleha mba hitsitsiana solika — kasinga iray azon-dry zareo amin'ny alalan'ny fanomezana sady zavatra iray anisan'ny tsy misy  ao Venezoela amin'izao fotoana izao.
‘Abuelito‘ (zokiolona na dadabe) misoratra anarana ao amin'ny Programa Mpiray Monina Tsara Fanahy. Sary nahazoana alalana, sady hita ao amin'ny Instagram .
Niasa izahay ary te-hizara izany: tsiranoka famonoana bakteria miisa 40 no nomena ny beantitra monina samirery tamin'ny alalan'ny @planbuenvecino #leatherheart2020 #Covid_19  pic.twitter.com/jFy1XjVcYh  – leatherheart (@leatherheartfun) April 16, 2020 
Ao anatin'izao krizy ara-pahasalamana tsy mbola nisy toy izany mifanandrify amin'ny krizy mahaolombelona ratsy indrindra  mianjady amin'ny firenena, tsy isalasahana fa fahagagana ho an'ny ‘abuelitos‘ venezoelana miisa 400 ny misitraka ny Programan'ny Mpiray Monina Tsara Fanahy.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2020/07/01/148147/
 fepetram-pihatakatahana ara-piarahamonina: http://mppre.gob.ve/wp-content/uploads/2020/03/informe_medidasvzlacovid19_150320-3.pdf
 efa ho iray tapitrisa ny zokiolona: https://www.voanoticias.com/a/el-buen-vecino-la-iniciativa-venezolana-que-ayuda-a-ancianos-en-medio-de-la-pandemia/5355624.html
 anisan'ny tsy misy: https://talcualdigital.com/escasez-de-gasolina-en-venezuela-se-propaga-mas-rapido-que-el-covid-19/
 solom-pampahafantarana ao Venezoela.: https://talcualdigital.com/redes-sociales-se-imponen-como-plataforma-de-informacion-en-medio-de-la-coyuntura/
 krizy mahaolombelona ratsy indrindra: https://cepaz.org/articulos/venezolanos-resisten-el-covid-19-en-medio-de-la-peor-crisis-humanitaria/